पत्रपत्रिका « Bikas Times
काठमाडौ । राजधानीका निजी विद्यालयले सरकारबाट शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत नगराई भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । सरकारको स्वीकृतिविना अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरी युलेन्स, पाठशाला, रातो बंगला, प्रिमियर, काठमाडौं वर्ल्ड,
काठमाडौं । राजधानीका निजी विद्यालयले सरकारबाट शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत नगराई भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । सरकारको स्वीकृतिविना अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरी युलेन्स, पाठशाला, रातो बंगला, प्रिमियर, काठमाडौं वर्ल्ड,
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले आइतार साँझ लिलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाउँदै पूर्वराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बेइजिङ पठाउने निर्णय गरेको छ । १५ दिनको भाका राखेर राजदूत पौड्याललाई फर्काउनुको कारणबारे बजारमा विभिन्न किसिमका हल्ला
काठमाडौं । जताततै कोरोनाको कहर छ । यस्तो बिपत्तिमा कूटनीतिक नियोगको भूमिकाशुन्य हुँदा त्यसले मुलुकप्रति नागरिकको विश्वास सम्मान गुम्ने वातावरण बनिरहेको छ । तर चिन्ता आफ्नैमात्रै छ । कांग्रेस सभापति
नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न अफरः ‘मैले चाहेको भए सरकार ढलिसक्थ्यो’
काठमाडौं । ‘तपाईंलाई असहयोग गर्ने भनेको छैन तर सहयोग पनि के नाममा गर्ने ? कुन कुरा हेरेर, यो चाहिँ राम्रो गर्नुभयो भनेर सहयोग गर्ने ?’ यो संवाद हो गत बुधबार
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विवाद गहिरिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शीर्ष नेताहरुले सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्। सचिवालय सदस्य
काठमाडौं । नेकपाको विवाद ‘विन–विन’मा टुंगिने भएको छ । नेताहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिने विकल्पमा सहमतिनजिक पुगेका छन् । गत
काठमाडौं । मोरङ बेलबारीको बाहुनी राधानगरमा झन्डै पाँच बिघा क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजना सञ्चालन भएको तीन दशक बिते पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। परियोजना सञ्चालन भएपछि उत्साहित भएका